Lafta Gareen oo ku socoda wadadii laga sugaayay. | SMC
Home WARARKA MAANTA Lafta Gareen oo ku socoda wadadii laga sugaayay.
Lafta Gareen oo ku socoda wadadii laga sugaayay.
Lafta-gareen oo marna tacsi u dirin dadkii ku geeriyooday Codaada Wanla-weyn ay ku sooduuleen dad deegaanka asal ahaan daaqsato ku yimid, wuxuuna Colaadaas uu ku tilmaamay mid islaanimada iyo Soomaalinimada ka fog, ayadoo loo fasirankaro inuu asiga garab siinaayo kuwa hada u ogalaaday inay ka mid noqdaan maamulkiisa. Wuxuuna u ogolaaday inay ka helaan Wanlaweyn:-
1)Gudoomiye ku Xigeen. (NUUR BAADIYOOW/ GAALJECEL- SUGOOW)
2) 120 ciidan Amaanka.
3) 2 Xubin oo golaha deegaanka ( 1 Xubin SUGOOW, 1 xubin CALOOFI).
Mar warbaahinta asiga afkiisa ku hadasho u waramayey waxaa uu sheegay inay sharciga la horkeeni doonaan cid walba oo ku lug leh dagaalka xun ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay Degmada Wanla-weyn iyo deegaanada hoostaga, arikaan ayaa isku badalay in dadkii sooduulay abaal mariin looga dhigo abood qiibsigaasi aan kor ku soo xusnay.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Lafta-gareen ayaa waxaa lagu sheegay in Guddi u saari doonaan Colaada Wanla-weyn, kuwaasi oo si deg deg ah u kala dhex geli doona beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamayo Wanlaweyn waa siduu hadalka udhigay.
Dad kooban ayaa aaminsan in lafta gareen uu qadiyad leeyahay banse arinkaan ayaa cadayneysa in uu san wax qadiyad ah laheyn, sida aan ognahay ciidamada uu ogolaaday in loo qaro gaaljecel ayaa laga keeney maamulka hirshabeele gaar ahaan magaalada Baledwayn iyo deegaano u dhow dhow.
Arinkaan ayaa loo adeegsaday xubno aad ugu kolsoonyihiin dadka deegaanka oo markii hore mooday inay qadiyad leeyihiin, ayagoona ay ka mid yihiinn masuuliyiin deegaanka u dhashay oo aan laga fileynin in beesha gaaljecel soo duushay aysan wax u ogolaaneynin.
Isku soo wada duub dadka ka soo jeeda Maayland ayaa u muuqda in dhulkooda la iibsanaayo, ayadoo loo adeegsanaayo hadba maamulkii meesha jooga, shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa hore u dhiibay 3 gobol halka lafta gareena uu haayo wadadii uu ku iibsan lahaa gobolka Shabeelaha Hoose.
W/Q: Maxamed Wadani
Previous articleSeven militants killed in security operation in southern Somalia
Next articleWasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya Oo Xil Cusub La Magacaabay